Mmekọrịta - Shanghai Freemen Chemicals Co, .Ltd.
Iji mejuputa Usoro Mmeputa nke oma site na laabu, anyi nwere ulo oru nyocha na Wuhan, China, na akwado Wuhan University. Anyị na-etinye aka n'inye ngwaahịa n'ahịa site na ntinye ọhụụ ọhụrụ maka usoro ọkwọ ụgbọelu na karịa yana yana njikarịcha usoro nrụpụta yana ndị na-eweta ya.
Tinyere ike nke R & D nke aka anyị, ụlọ ọrụ mmepụta na ngwongwo ngwongwo nke ndị na-eweta klas mbụ, anyị dị njikere ịchọta ihe okike maka nsogbu ndị siri ike chere ndị ahịa anyị ihu na ọnọdụ azụmahịa na-agbanwe agbanwe ugbu a.
Anyị dị njikere ige ntị nke ọma na nsogbu gị, nyefee echiche ndị mbụ na enwere ike ịme ma tinye uru maka atụmatụ gị ma ọ bụ mbọ gị niile.
Njikwa njikọ mbufe
CAS 3003-25-2, CAS 608-25-3, 2-Methyl resorcinol, Amụma, C10-C14-tert-alkyl, CAS 453-18-9, (R) -3-Aminobutanol,